Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max : Drop Test မှာ ဘယ်သူ ပိုမာသလဲ? – DigitalTimes.com.mm
Samsung Galaxy S21 Ultra vs iPhone 12 Pro Max : Drop Test မှာ ဘယ်သူ ပိုမာသလဲ?
အလန်းစား ဖုန်းတွေကို Drop Test လုပ်တာ နှမြောစရာ ကောင်းပေမယ့် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။ အခုတော့ EverythingApplePro က Samsung Galaxy S21 Ultra နဲ့ iPhone 12 Pro Max တို့ရဲ့ Drop Test ကို နှိုင်းယှဉ်ပြသလိုက်ပါတယ်။
လက်ကောက်ဝတ်နေရာကနေ စတင် ချပြခဲ့ပြီး မျက်နှာကျက် အမြင့်မှာ အဆုံးသတ်သွားပါတယ်။ စမ်းသပ်မှု ပြီးတဲ့နောက်မှာ S21 Ultra ဟာ Lens Cover နဲ့ ကွာသွားခဲ့ပြီး မျက်နှာပြင် ကွဲအက်သွားပါတယ်။ iPhone 12 Pro Max ရဲ့ အနောက်ဘက် ဖန်ဟာလည်း ကွဲအက်သွားတာ မြင်ရပါတယ်။
ဗီဒီယိုကို အောက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီ စမ်းသပ်ချက်တွေကို အခြေခံကာ ဘယ်ဖုန်း ပိုမာသလဲ ဆိုတာ တကယ်တော့ ဆုံးဖြတ်လို့ မရပါဘူး။ သိပ္ပံနည်းကျ ရလာဒ် မဟုတ်ဘဲ အပျော်သဘော စမ်းသပ်ထားတာပါ။ ဖုန်း ၂ လုံးကို တူညီတဲ့ ထောင့်နဲ့ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကျဖို့ဆိုရင် စက် ၁ လုံးလိုအပ်ပါတယ်။
Foldable မျက်နှာပြင်တွေကို တရုတ် ကုမ္ပဏီတွေကို ရောင်းမယ့် Samsung
5G နဲ့ 65W Fast Charging ပါတဲ့ realme X7 ကို အိန္ဒိယမှာ ကြေညာပြီ